I-Semalt: Ugaxekile lwe-Ghost Referral Spam
uRyan Johnson, u-10 (Semalt oyingcali, uchaza ukuba umoya wokudlulisa / ukuthumela ugaxekile uhlobo logaxekile olujolise kwi-akhawunti ye-Google Analytics yabanikazi bewebhusayithi. Xa abanikazi bewebhusayithi bechofoza kwi-URL yokudlulisa ihostlo, bathatyathwa kwenye iwebhusayithi eyenza ugaxekile ukuba athathe imali kwizithuthi ezinobungozi. Ii-URL ze-Ghost zifakwe kwi-data ye-analytics yomnikazi wendawo ngokusebenzisa i-bots okanye i-spiders yewebhu, ngoko, ukushiya ii-URL ezikhohlisayo - website logo maker download. Abagaxekile bavame ukusebenzisa idilesi ethile yokubhenela ethumela izixwayiso ze-imeyile kunye nezibonelelo.
njani ukusetyenziswa kwegciwane logalelo
Ukuhlaselwa koMoya ku-spam kuhlaselwa kwi-webmasters abasebenzisa i-Google Analytics. Zijolise ekukhohliseni umntu oswelekileyo okanye umnini wewebhu ukucofa ikhonkco zabo kwi-Google Analytics, ngoko, ukutyelela iphepha labo. Ezi tyelelo ze-intanethi zingangenza amanethiwekhi afumaneke njengotyelelo olusemthethweni ngabantu. Bafumana i-traffic ngokusebenzisa le ndlela, kwaye yileyo ndlela abayenza ngayo imali.
I-Google Analytics irekhoda ii-URL ze-URL ekubhekiselele kwi-data ye-analytics ukuze xa wena, umnini-mhlaba ujonge idatha yakho ye-analytics, ufumana uluhlu lwewebhu ezidibanisa kwiwebhusayithi yakho. I-spammer yenza i-website enokuthi ibe yintengiso, ukuthengisa iimveliso okanye ukuhanjiswa kwakhona. Ukubuyisela umsebenzi ngokusebenzisa iskripthi kwiphepha lekhowudi elithumela zonke izithuthi ezingenayo kwiwebhusayithi ethile ecacileyo i-HTML iqondise kwakhona kwi-index index page .
Kwezinye iimeko, i-spam yokuthutha i-spam isebenzisa i-bots ejolise kubanikazi bewebhu..Abantu abafumana iiwebhusayithi ezinefayile ezibuthakathaka ze-robots.txt bangaxhomekeke ekuhlaselweni kwabathumeli be-spam abafakiweyo. Kule meko, abahlaseli bangabakho kwimveliso ethile. Baqhuba i-traffic fake kwimida yabo kwithemba lokuthengisa ezinye kwiwebhusayithi yakho.
Indlela i-spam yokudlulisela ngayo i-spam ithintela umntu
Enye yezinto eziphambili ze-spam yokudlulisa ngedatha yefayile yefayile. Kwiimeko ezininzi, i-spam skews idilesi yakho yewebhusayithi. Ngokomzekelo, ukuba i-ghost yokudlulisa i-spam ihlasela i-akhawunti yakho ye-GA ingabhalisa ezinye izithuthi ezingabonakali kwiwebhsayithi yedeshibhodi. Kule meko, ixesha leseshoni yeseshoni yakho ngokuqhelekileyo li-0 imizuzwana. Abahlaseli banokugqiba nokuba basebenzise ii-URL ezikhohlisayo ukuhambisa izithuthi ze-bot kwi-domain yakho. Isiphumo kukuba ukusebenza kakubi kwewebhsayithi, zombini okanye nakwezemali.
Xa ucofa amaqhosha ukusuka kwi-imeyli yokuthumela i-spam, unokuhlaziya kwii-URL ezinobungozi. Kwamanye amaxesha, abantu baba ngamaxhoba okuhlaselwa ngokuphanga ngale ndlela. Kukho imeko xa abagaxekile befaka i-malware, i-Trojans, kunye ne-virus kwii-imeyile. Gwema onke ama-imeyli ogaxekile. Ngaphezu koko, soloko usebenzisa umniki-imeyili okhuselekileyo njengeGoogle. Gwema ukujonga kuqala imifanekiso kwiimeyile zakho. Ungaze uvule izinamathiselo ezivela kwi-imeyli yogaxekile. Zingenakho i-malware!
Wonke umsebenzisi we-intanethi kufuneka ahlale kude ne-spam yokuthumela. Le yindlela ekhohlisayo evela kummandla oqhelekileyo wogaxekile njengoDarodar. Ezi zintsholongwane zingabangela imiphumo emibi njenge-intanethi. Kwamanye amaxesha, abantu bafumana ukutyelela kweewebhu ngokugqibeleni okuphelisa i-skewing data yewebhusayithi. Esi sikhokhelo se-SEO iqulethe amathiphu afunekayo ekuncedeni ukujongana ne-spam yokuthumela. Unokukwazi ukunqanda iindwendwe zakho ukuba zibandakanyeke kwimisebenzi yokuphequlula.